फोरम नेता भारत बाट बालक अपहरण गरेको आरोपमा पक्राउ ,, – Ranga Darpan
फोरम नेता भारत बाट बालक अपहरण गरेको आरोपमा पक्राउ ,,
मंसिर, २६ काठमाडौं – जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाले एक बन्धनक बालकको सकुशल उद्दार गरेको छ ।भारतको सुपोलस्थित किशोरपुर थाना वडा नं. २ बाट अपहरित ७ वर्षीय बालक महफुज आलम २० गते हराएका थिए । नेपालमा बन्धक बनाएर राखिएको सूचना पाएको २४ घन्टा वित्न नपाउँदै बुधबार अवेर प्रहरीले उद्दार गरेको छ ।
घटनामा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले बताए । भारतबाट बालकलाई २० गते अपहरण गरेर ल्याइएको रहेछ । हामीलाई २४ गते साँझ खबर आयो । भोलिपल्ट साँझसम्ममा हामीले बालकको उद्दार गरिसकेका थियौं । ढकाले भने ।
पक्राउ पर्नेमा गौरिगञ्जका ४७ वर्षीय बद्री यादव, गौरीगञ्ज,४ का श्रीप्रसाद मुखिया र उनकी श्रीमती अन्जुदेवी मुखिया छन् ।पक्राउ परेका यादव संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुन् ।
उनी गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसअघि ०६४ र ०७० सालको निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेवार बनेका थिए ।
प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा अपहरणपछि बालकलाई झापाको गौरिगञ्ज हुँदै नेपालतर्फ लगेको खुल्यो । त्यसवेलासम्म बालकका बुबालाई फिरौती वापत १५ लाख रुपैयाँ भारु माग गर्दै फोन आउन थालिसकेको थियो ।
‘फिरौती नदिए वा प्रहरीमा खबर गरे बालकलाई मारिदिने धम्की दिइएको थियो’, एसपी ढकाल भन्छन्, ‘तर, हामीलाई ४ दिनपछि त्यो खबर प्राप्त भयो र, अनुसन्धानका लागि टोली खटियो ।
दमक र गौरीगञ्ज क्षेत्रमा सुक्ष्म रुपमा प्रहरी परिचालित भए । दमकका डीएसपी श्यामल सुब्बा, गौरिगञ्जका प्रहरी निरीक्षक टेकेन्द्र शर्मा पौडेल लगायत सीमा क्षेत्रको चेकजाँच र होटल लजहरुको निगरानी र तलासीमा खटिए ।
२५ गते बिहान ४ बजेतिर फिरौती लिन एक अपहरणकारी गौरिगञ्जको खजुरगाछी चोकमा आइपुगे । तीन वटासम्म ठाउँ परिवर्तन गरेर उनी त्यहाँ आउन राजी भए । फिरौती बुझ्न आएका उनी प्रहरीको नियन्त्रणमा परे ।
त्यसपछि खुल्यो, अपहरणका नाइके फोरमका स्थानीय नेता बद्री यादव रहेछन् । उनकै सूचनाको आधारमा प्रहरीले दमक-५, गोर्खाली टोलस्थित देउराली होटलको कोठा नं. १०७ बाट अपहरित बालकको सकुशल उद्दार गर्‍यो भने अञ्जुदेवी पक्राउ परिन् । थप अनुसन्धानका क्रममा श्रीप्रसाद पनि समातिए ।
अपहरणमा सलग्न अझै एक जना फरार छन् । उनको खोजि भईरहेको प्रहरीले बतायो ,पक्राउ परेका सबैमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जिल्ला अदालत, झापाबाट ५ दिनलाई म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
चलचित्र ‘चौका दाउ’को ट्रेलर सार्वजानिक ,,
पूर्वमिस नेपाल सुब्बा भन्छिन महिनावारी हुँदा अहिलेपनि परिवारले विभेद गर्छ ,